Iyo iPhone 6s kesi haienderane neiyo iPhone 7 | IPhone nhau
Uyu mubvunzo wakapusa, asi unowanzo bvunzwa nevose varidzi vezvinhu zvitsva zve iPhone. Ichokwadi ndechekuti iwo mubvunzo unowanzoitika weiyo iPad, huwandu hwezvigadzirwa uko fanano pakati peimwe neiyi inenge yakazara, asi kwete muiyo iPhone renji. Kune rimwe divi, iyo iPhone 5 / 5S kesi dzaive dzakabatana zvizere neiyo iPhone SE nekuda kwezvikonzero zviri pachena (kunyangwe kana vachizviita zvakapfava vanocheka rwandu) Isu tinodyara kusahadzika, kunze kwekamera yekumashure, maererano nematanho uye saizi iyo iPhone 6s uye iPhone 7 mapatya hama, asi Ndiwo mamiriro eiyo iPhone 6s akakosha iyo iPhone 7?
Mhinduro ndeye. Ngatitangei nezviri pachena, iyo kamera. Kunyangwe kupenya kuri munzvimbo imwechete ine hungwaru, iyi kamera nyowani inoita kunge yakawedzera kupamhamha, pamusoro pekuti hump pachiitiko ichi inoitwa yakafara, uye kwete kuburikidza nerin'i yesimbi, mhinduro yakanyanya kunaka kupfuura yatinogona kuona mu iPhone 6, Kutaura chokwadi. Kune rimwe divi, mune iyo kesi yeiyo iPhone 7 Plus isu tine mbiri kamera, zvikonzero nei isingakwani zvinopfuura pachena.
Asi ngatiendei kuzasi kwechigadzirwa, hatina 3,5 mm jack, gomba risingatarisike kana tikaisa chivharo. Muchidimbu, izvi ndezvimwe zvezvikonzero, kunyangwe hazvo zvakaenzana saizi uye ukobvu, iwo madiki madiki anotimanikidza kutenga makesi matsva, tichigadzira rimwe gomba muhomwe medu, kunyanya kana isu tichida kutenga iyo iyo iPhone 7 Jet Nhema, Isu tinokuyeuchidza kuti Apple inoyambira nezve zvinogona kuitika abrasions (kukwenya kana scuffs) mupendi yechigadzirwa, ndiko kuti, zvaizopedzisira zvarasika ruvara sezvakaitwa neiyo nhema iPhone 5 muzuva rayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » IPhone 6s kesi hadzienderane ne iPhone 7
AppleCare + inogona kusvika kuSpain nePhones nyowani